“स्वाद स्वार्थ र सेक्स” – Sajhedari Daily
By साझेदारी दैनिक On २९ आश्विन २०७७, बिहीबार ०७:०५ 580
-डा.सजय गिरी /
मैले शहरी स्वास्थ्य प्रर्वधन केन्द्रमा जागिर शुरु गरेकै तीन महिनामा कोभिड संक्रमण्ड चीनको हुआन शहरबाट शुरु भई संसारभरी नै महामारीको रुप लियो र म पनि आयुर्वेद असिस्टैन्टको रुपमा सण्डै ३–४ महिना कोरोनाको रोकथाम नियणत्रण र उपचारको लागि खोलिएको कोभिड फिभर अस्वाइ फिना स्क्रीनिङ्ग क्रिनीकमा काम गर्ने मौका पाए । कोरोना अहिले संसारकै लागि टाउको दुखाइ सावित भएको छ ।
हामी दिनहुँ कोभिड विरुद्धको उपचार, प्राथमिक उपचार, रोकथाम नियमत्रण र खोपको बारेमा विभिन्न अनुमान गर्दैछौं तर वास्तवीक उत्तर समाधान न हामी सित छ न त संसार सित नै वास्तवमा कोभिडको निर्मुलीकरण वा निर्यलीकरणको उपाय कहिले र कुन देशले गर्छ ??? यो प्रश्न गर्भगृह मै छ ।
कोभिड हाम्रो सामु मात्र होइन संसार कै लागि संकटको रुपमा देखिएको छ भने यर्थाथ छ हाम्रो सामु ।। हुनत विभिन उपचार र को उनुमान हामीले गरेकै हो संसारले पनि नगरेको होइन तर कसैले केह ीगर्न सकेको छैन ।
कोभिडको कारणलाई केलाउने हो भने म भन्छु मुख्यत कोरोनाको मुलभुत कारणहरु स्वाद, र स्वार्थ र सेक्स नै हो । उपचार पनि धेरै सनिलो Isolation, Sanitation र Nutrition नै हो । हो कोभिडको कारण स्वाद स्वार्थ र सेक्स हो भने उपचार Isolation, Sanitation र Nutrition भने यथार्थहरु लाई हामीले केलाउनै पर्ने हुन्छ ।
आज मैले एउटा प्रश्न जुन कि मेरो आयुर्वेदको अन्तिम सालको चरक संजिलोमा सोधिएको थियो कि “सबै रोगहरुको कारण पाप नै हो भनेर सवित गर्नुस् ??” हो यहाँ यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुभन्दा पाप र पुण्यको परिभाषा बुझ्नै पर्ने हुन्छ ।। पापको परिभषा धेरै सरल र सहज छ, प्रकृतको विरुद्धमा हुने, गरिने जती पनि कृयाकलाप नै पाप हो ? पापको परिभाषालाई बुझ्न हामीले हाम्रो मुलभुत गल्तीहरु स्वाद, स्वार्थ र सेक्स आर्थात हाम्रो भित्र लुकेको हवस (सैडिज्य) लाई अन्य गर्ने पर्ने हुन्छ ।
अत ः हामीले हाम्रो स्वाद, स्वार्थ र सेक्स यानीको हाम्रो हवस (Sadism) लाई प्रस्कृत गर्दै आइसोलेसन, सैनीटेसन र न्यूट्रीसन अर्थात आयुर्वेदको मुलयुता सिधान्तलाई बुझ्नैपर्ने हुन्छ कि ????? स्वाद स्वार्थ सेक्स यानि हामी भित्र रेहेका हवस (Sadism) लाई त्यागौ ।
ज्यान मार्ने मुद्धामा ३० वर्षदेखि फरार अभियुक्त कुशवाहा पक्राउ
निजगढ नगरपालिकामा शुरु भयो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम